Mpanamboatra sy mpamatsy lamba tsy misy tenona PP Spunbond | Rayson
Rayson RAYSON NON WEVEN FABRIC sy mpamatsy ao Shina.
Lamba tsy tenona Ss
Lamba tsy tenona ara-pahasalamana
Lamba tsy tenona amin'ny fambolena
Volomaso fiarovana Frost
Lamba fanaraha-maso tsy misy tenona
Takelaka tsy tenona
Lamba tsy tenona Sms
Lamba tsy voatenona tsy voatenona
Fanjaitra tsy tenona vita amin'ny fanjaitra
Lamba tsy tenona amin'ny spunlace
Vitsy isan-karazany amin'ny kalitao optimumPP spun-fatorana lamba tsy tenona dia omen'ny orinasa Rayson amin'ny habe sy refy isan-karazany. Izahay dia nanamboatra sokitra ho iray amin'ireo mpanamboatra lamba vita amin'ny kofehy tsy misy tenona PP izay malaza indrindra ao Shina. Mampiasa fitaovana manta tena tsara sy teknika farany hanamboarana lamba tsy tenona PP izahay. Ity lamba PP tsy tenona ity dia fampifangaroana maharitra amin'ny faharetana, ny fahalemena ary ny tanjaka tsara.
Polypropylene Spunbond Nonwoven lamba ho an'ny lohataona poketra
Ny lamba Spunbond Nonwoven dia midika hoe lamba polypropylen Spun-bond, dia tanjaka sy elongation tsara. Io no fitaovana mety ho an'ny lohataona poketra. Ny lanjan'ny lamba dia avy amin'ny 60GR hatramin'ny 80 80GR miaraka amin'ny sakany namboarina. Rayson Non woven Fabric dia manome anao ny vidin'ny PP tsara indrindra Spunbond Nonwoven, tongasoa eto aminay.
Ny fanodinana lamba tsy misy lamba
Ny fanodinana lamba tsy misy lamba. Ny karazana roa. PCS tsy misy pcs Nonwoven Compress miaraka amin'ny landihazo .Tsy misy pcs telo tsy voatanisa.
Best PP Spunbond Non Wovern Woven ho an'ny vidin'ny orinasa orinasa -
Best PP Spunbond Non Wovern Woven ho an'ny vidin'ny orinasa orinasa -.Izahay dia mpanamboatra ny lamba pp spunbond nonwoven misy traikefa maherin'ny 14 taona mahery. ISO, BV& SGS Certificated. Ary manome lamba potika tsy voaroaka ho anao mivantana izahay.Ny vokatrao dia mampiditra polypropylene ho toy ny akanjom-bary, amin'ny alàlan'ny mari-pana, ny sivana, ny landy, ary ny glued mafana, avy eo dia nanamboatra lamba ary nanodidina ny farany ary nanorotoro azy.Ny kalitaon'ny vokatra azontsika dia azo antoka ary ara-potoana ny fandefasana. Vokatra lehibe: Fitaovana tsy misy / fanamboarana kitapo tsy misy fambolena na fambolena sy fambolena fambolena / ara-pitsaboana
Lamba polypropylene avo lenta tsy misy endrika geotextile
Polypropylenene Non geotextiles ny geotextiles voafatotam-paty tsy misy naoty vita amin'ny lamba 100% polypropylene lamba. Ny lamba polypropyle tsy misy polypropylene dia ampiasaina amin'ny rindranasa maro isan-karazany amin'ny tsenan'ny tontolo iainana sy ankapobeny, toy ny fanorenana arabe, ny tetik'asa fanorenana fanatanjahan-tena, ny fisarahana sy ny fiarovana ny tany.
Asehoy ny vokatra any Rayson
Foshan Rayson Non-Woverno Co, Ltd. dia mpanamboatra efa zatra ao amin'ny indostrian'ny lamba tsy misy fako miaraka amin'ny traikefa an-taonany maro. Natao ho an'ny fikarohana sy fampandrosoana, ary famokarana ny famokarana lamba tsy misy lamba, izay mahay mamokatra lamba tsy misy tenona, SS Non wovrown, SMS, fanandramana ary slunlaw tsy misy lamba , Miaraka amin'ny lanja mavesatra amin'ny 10GSm ka hatramin'ny 150gsm ao anatin'ny sakany 4.2M, miaraka amin'ny habetsaky ny famokarana isan-taona ka hatramin'ny 36000 taonina. Ny orinasa dia mahavita mamokatra lamba tsy vita amin'ny loko sy habe maro samihafa, mifanaraka amin'ny fampiasana maro samihafa.
PP Spunbond Non Woven Geotextile
Tsy geotextile Mampiasa amin'ny indostria fananganana sy ny tanindrazana amin'ny fotoana rehetra ary manamboatra marika amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny tany, manatsara ny tranokala dia mitanila sy fanemorana, mampisaraka ny fitambaran-javatra sy ny fanaparitahana entana. Ity lamba tsy misy geotextile ity dia vita amin'ny polypropylene spunbond tsy noforonina, mahazatra amin'ny loko mainty sy volondohany. Ny lamba dia biodegardable, eko-sariaka sy ny UV.
Vokatra lehibe amin'ny orinasa RAYSON NON Company
Foshan Rayson Non-Woverno Co, Ltd. dia mpanamboatra efa zatra ao amin'ny indostrian'ny lamba tsy misy fako miaraka amin'ny traikefa an-taonany maro. Natao ho an'ny fikarohana sy fampandrosoana, ary famokarana ny famokarana lamba tsy misy lamba, izay mahay mamokatra lamba tsy misy tenona, SS Non Wovernew, SMS , Miaraka amin'ny lanja mavesatra amin'ny 10GSm ka hatramin'ny 150gsm ao anatin'ny sakany 4.2M, miaraka amin'ny habetsaky ny famokarana isan-taona ka hatramin'ny 36000 taonina.
Fitaovana tsy tapaka tsy tapaka
Rayson dia orinasa matihanina izay nanao lamba tsy misy papan-tsolotra mihoatra ny 14y.Lamba vita amin'ny tsy tapaka dia iray amin'ny vokatrao izay ampiasaina amin'ny fanaka, toy ny matotra sy ny sofa. Ny tsipika mialoha ny fiakarana dia mora foana ny ranomaso. Izy io dia afaka manatsara ny fahombiazan'ny famokarana fambolena. Ny lamba tsy namboarina mialoha ny fanaka dia haondrana ho antsika sy ny tsenan'ny eoropeana.
Fanjaitra lamba tsy misy lamba
Fanjaitra lamba tsy misy lambaNy lamba vita amin'ny beige tsy misy lamba dia ampiasaina ho an'ny saron-kasety izay mahatonga ny fandriana mety kokoa.Ny habeny dia 2.1m ka hatramin'ny 2.4m.60gram 60gram ho 100grambeige, volom-bolo, loko mainty ary fotsy.
Spit Bended PP Spunbond Non Wovern Wovern Woven ho an'ny kidoro
Ny lamba tsy misy kofehy, ny karazana pp dia misy lamba tsy misy lamba, dia vita amin'ny milina fanenonam-borona izay mamatotra ny tranokala, na mitazona ny tranokala eo amin'ny toerany, miaraka amin'ny yarns lava. PP Spun Bond Fitaovana lamba tsy misy kofehy dia ampiasaina ho toy ny insulation thermal na fitaovana fonosana na ho fototry ny famokarana quilts, bodofotsy, ary palitao. Ny lamba vita amin'ny pp tsy voaroy dia ny fitaovana lehibe amin'ny fanaovana kasety. Izy io dia ampiasaina ho toy ny lamba eo am-pototry ny kasety. Ny lamba tsy misy kofehy dia ao amin'ny 70gr to 100gr amin'ny loko maro samihafa. Rayson no mpanamboatra lamba vita amin'ny pap-bozaka tsara indrindra. Tongasoa eto an-tsaina.
Ny lamba tsy misy kofehy tsy vita amin'ny boaty lohataona
Azontsika atao ny mamonjy ny olana rehefa mamokatra paosy amin'ny lohataona misy tabataba lehibe. Ny lamba vita amin'ny dot nohavaozina dia afaka mamonjy ny olana rehetra amin'ny tabataba rehefa mamokatra karaoty, sofa ary fanaka hafa. Malefaka sy mamelona azy io. Ary ny stenght sy ny elatra dia mitazona tsara hatrany.
Ny lamba tsy voaroy
Ny lamba tsy voaroaka rano tsy misy rano.Ampiasaina amin'ny takelaka fandriana ara-pitsaboana sy ny fanalan-karena azo atao, ohatra, ny saron-tava fandidiana, ny akanjo azo ampiasaina.Izahay dia manana habe maro ho an'ny mpanjifa misafidy .and loko sy grama.Manangona foana ao anaty kitapo na baoritra.